China TS3 Wireless Remote-Inodzorwa Hupenyu Buoy Mugadziri uye Mutengesi | Topsky
Iyo isina waya iri kure kutonga zvine hungwaru simba hupenyu hupenyu buoy idiki-inoponesa-inoponesa hupenyu irobhoti iyo inogona kushandiswa kure. Inogona kushandiswa zvakanyanya mukununurwa kwemvura inodonha mumadziva ekushambira, madziva, nzizi, mahombekombe, yachts, maferi uye mafashama.
Remote control inoonekwa kuburikidza neremote control, uye mashandiro ari nyore. Iyo isina kuburitswa kumhanya ndeye 6m / s, iyo inogona kukurumidza kusvika kune munhu akawira mumvura kununurwa. Iyo inomhanya mhanya ndeye 2m / s. Kune mwenje wekupinda wepamusoro wekuyambira magetsi kune ese mativi, ayo anogona nyore kuwana nzvimbo yehupenyu buoy husiku uye mune yakaipa mamiriro ekunze. Iyo yekumberi inorwisa-kurovera tambo inogona kunyatso kudzivirira kukuvara kwekurovera kumuviri wemunhu panguva yekufamba kwekufamba. Propeller inoshandisa chifukidziro chekudzivirira kudzivirira zvinhu zvekunze kubva kumhepo. Rutivi rwemberi rwehupenyu buoy rakagadzirwa nekamera bracket, iyo inogona kuiswa nekamera kuti inyore ruzivo rwekununura. Hupenyu buoy hune yakavakirwa-mukati GPS system, iyo inogona kuona chaiyo yekumira.
Kana paitika tsaona yemvura, simba rehupenyu buoy rinogona kuiswa, uye nzvimbo yemunhu akawira mumvura inogona kunyatso kuwanikwa kuburikidza nekumisikidzwa kweGPS, kuziva vhidhiyo, kuzivikanwa kwebhuku, nezvimwewo, uye neremote control inogona kushandiswa kusvika pachinzvimbo chemunhu akawira mumvura kutanga kununura. Avo vanowira mumvura vakamirira kununurwa, kana kudzosa vanhu kunzvimbo yakachengetedzeka kuburikidza nesystem yemagetsi, iyo yakahwina nguva yakakosha yekununura uye nekuvandudza zvakanyanya mwero wekupona wevanhu vakawira mumvura. Kana mamiriro emunhu achiwira mumvura akakosha, iro simba rehupenyu buoy rinogona kutakura vanunuri kuti vakurumidze kuswedera kumunhu anowira mumvura kununura. Rudzi urwu rwekushandisa runoponesa simba rinokosha remununuri uye rinovandudza zvakanyanya kugona kwekununura. Kana kununura kuchidikanwa kure kure (kunze kweiyo inoonekwa renji), iro simba rehupenyu buoy rinokwanisa kushandira pamwe nedrone kuti iite mativi-matatu ekununura. Iyi-mativi matatu akangwara asina kunyorwa yekununura system inobatanidza mweya nemvura inovandudza zvakanyanya nzvimbo yekununura uye inowedzera zvikuru nzira dzekununura.
2. Zvekugadzira zvitaurwa
2.1 Kuyera: 101 * 89 * 17cm
2.2 Kurema: 12Kg
2.3 Kununura mutoro wekugona: 200Kg
2.5 Kwete-mutoro kumhanya: 6m / s
2.6 Kumhanya kwevanhu: 2m / s
2.7 Hupenyu hwepasi-hwebhatiri hupenyu: 45min
2.8 Remote control daro: 1.2Km
3.1 Iyo goko rakagadzirwa neLLDPE zvinhu zvine yakanaka yekupfeka kuramba, kuputira magetsi, kuomarara uye kutonhora kuramba.
3.2 Kununura nekukurumidza mune yese maitiro: isina chinhu kumhanya: 6m / s; inomhanya mhanya (80Kg): 2m / s.
3.3 Iyo pfuti-yerudzi rwekudzora kure inogona kufambiswa neruoko rumwe, mashandiro ari nyore, uye iro simba rehupenyu buoy rinogona kuve riri kure-rinodzorwa nenzira kwayo.
3.4 Ziva Ultra-refu-kure kure kudzora pamusoro 1.2Km.
3.5 Tsigiro GPS yekumisikidza system, chaiyo-nguva yekumisikidza, nekukurumidza uye kwakanyanya kumisikidza.
3.6 Tsigira rimwe-bhatani auto kudzoka uye pamusoro-renji auto kudzoka.
3.7 Tsigira kutyaira kune mativi maviri, nekwaniso yekununura mudutu.
3.8 Tsigira akangwara kururamisa nzira, zvakanyanya kushanda.
3.9 Nzira yekufambisa: Iyo propeller propeller inoshandiswa, uye redhiyo yekutenderera iri pasi pe1 mita.
3.10 Shandisa lithiamu bhatiri, yakaderera-mhanya bhatiri hupenyu hwakakura kupfuura 45min.
3.11 Yakabatanidzwa yakaderera bhatiri alarm basa.
3.12 Yakakwira-yekupinda chiratidzo cheyambiro mwenje inogona nyore kuwana yekuona mutsara kumisikidza husiku kana mune yakaipa mamiriro ekunze.
3.13 Dzivisa kukuvara kwechipiri: Iwo epamberi anodzivirira kurovera anodzivirira kukuvara kwekurovera kumuviri wemunhu panguva yekufambira mberi.
3.14 Emergency kushandisa: 1 kiyi kubhuti, inokurumidza bhuti, yakagadzirira kushandisa kana uchidonhera mumvura.
Kuongorora uye kuferefetwa kweNational Fire Equipment Quality Supervision uye Yekuongorora Center
China Classification Society (CCS) Rudzi Kubvumidzwa
Pashure: ROV-48 Mvura Kununura Remote Kudzora Robhoti
Zvadaro: RXR-M80D Moto Kurwisa Robhoti
QXWB-22 Sango Moto Moto Yakanyanya Pressure Mvura ...
JF2000 inotakurika bolometer
MF14 gasi mask
YSD 130Inotenderera mukati yakachengeteka Dhijitari Inzwi ...
Hydraulic Kununura Set GYJK-25-18